I-Bingo yase Ninigizimu Afrika | Dlala i-Bingo ku inthanethi
Ikhaya / Imihlahlandlela / i-bingo eku inthanethi eningizimu africa
I-Bingo eku inthanethi eNingizimu Africa
I-Bingo eku-inthanethi eNingizimu Afrika iya ngokuya yanda futhi kunezindawo eziningi ze-inthanethi zebingo ezamukela abadlali baseNingizimu Afrika, kwesinye isikhathi udinga nje ukwenza ucwaningo oluncane ukuze ubathole. Senze imibuzo ezindaweni ezintathu zaseBrithani zemidlalo yebhingo, futhi bonke bayabamukela abantu baseNingizimu Afrika. Kuzodingeka ukuthi uguqule amaRandi akho abe ngamaphawundi aseBrithani ngaphambi kokuba ubambe iqhaza.
IBingo yaqala e-Italy ngo-16th Century lapho yayisebenza khona njenge-lottery yezwe. Kunengqondo uma ubheka ukuthi amabhola ebingo afana kanjani namabhola awasebenzisayo kwilotto laseNingizimu Afrika. IBingo idlalwa emhlabeni wonke kepha yathandwa kakhulu ngokufika kwehholo lebhingo eliku-inthanethi.
Bheka Isiqondisi sethu se-Bingo esiku inthanethi.
Kunamahholo amaningi e-bingo aku-inthanethi anga vumelane nomoya wakho. Isizathu esenza abantu abaningi bakhethe ukudlala ibhingo kweminye imidlalo yasekhasino eku-inthanethi, ukuthi ibhingo ibhekwa ‘njengephephile’ futhi inenhlalo eningi. Lokhu kungenxa yokuthi ibingo idlalwe ngamaqembu esonto nawomphakathi kule minyaka eyikhulu edlule. Isici senhlalo singena lapho uthola ukuthi wonke amahholo ebhingo aku-inthanethi anamagumbi okuxoxa akuvumela ukuthi uxoxe nabanye abadlali futhi ubafisele inhlanhla.
Kunezindlela ezimbalwa ezahlukahlukene zomdlalo ongakhetha kuzo. Ungathanda ukudlala ibhingo yamahhala, ibhingo yokubheja ephansi noma i-roller ephezulu yebhingo? Ungathanda indawo enamahora angu-24 noma ungakujabulela ukudlala kuleyo enemidlalo kuphela phakathi kuka-11AM -11 PM? Izindaba ezimnandi ukuthi kunehholo lomdlalo webhingo nomdlalo laphaya ongavumelana nomoya wakho nobuntu bakho. Ngikufisela inhlanhla!